Soo dejisan Putty 0.74 – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilPutty
Bogga rasmiga ah: Putty
Putty – software ah oo lagula kala duwan ee hab-maamuus helaan fog shaqada. Software wuxuu bixiyaa xiriir la-hubo in ay PC ama server Sharciyada qoran ee NOAA, Telnet, rlogin iyo TPC. Putty waa weyn ee dejinta routere, maamulka fog iyo ku xidhnaanta boosteejada ah. Software waxa ku jira tiro badan oo ka kooban, ay ka mid yihiin qalab u dhalin Ssh-furaha iyo Ssh-sugida. Sidoo kale Putty badbaadiyay liisaska iyo goobaha xiriir la tuuro fudud ee software.
Taageer kala duwan ee hab-maamuus helaan fog
Save the list iyo goobaha xiriir
Taageerada loogu talagalay sugida muhiimka ah dadweynaha
In uu ka shaqeyn marayo server wakiil ah
Soo dejisan Putty
Faallo ku saabsan Putty
Putty Xirfadaha la xiriira
Adeegani wuxuu soo bandhigayaa dhammaan software iyo adeegyo ku xiran shabakada nidaamka TCP. Barnaamijkani wuxuu dili karaa geedi socodka wuxuuna joojiyaa xiriirinta.
Tani waa adeeg VPN ah oo taageera noocyada kala duwan ee isku xirka iyo isdabajoogidda, waxayna bixisaa shaqada iyada oo aan qoraalka waxqabad.